नेपालीको रोजाइ मुस्ताङ - Samadhan News
नेपालीको रोजाइ मुस्ताङ
समाधान संवाददाता २०७८ कार्तिक ४ गते १३:०९
मुस्ताङमा अहिले आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो छ । सरदको मौसम र चाडवाडको बिदा मिलाएर नेपाली घुम्न मुस्ताङ आएका हुन् ।
मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शनका लागि खुला भएको र मुस्ताङ आउने पर्यटकलाई कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट वा खोप कार्डका आधारमा जिल्ला प्रवेश दिइएपछि यहाँ आउनेहरु बढेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका सूचना अधिकारी प्रताप पौडेलले घटस्थापनादेखि बुधबारसम्म ३ हजार ९ सय २० सवारी साधन मुस्ताङ भित्रिएको जानकारी दिए ।
यो अवधिमा १७ हजार ६ सयभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक यहाँ आएका छन् । पछिल्लो समय कोरोनाको दोस्रो भेरियन्ट कम हुँदै गएकाले मुस्ताङ घुम्ने पर्यटकलाई कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट अथवा खोप कार्डको आधारमा जिल्ला भ्रमण गर्न सहज भएको उनले बताए ।
यसरी घुम्न आउनेमा अधिकांश युवायुवती छन् । मुस्ताङ उद्योग बाणिज्य संघ अध्यक्ष खगेन्द्र तुलाचनले लामो समयदेखि कोरोना कहरका कारण सुस्ताएको मुस्ताङको पर्यटनले ढिलै भए पनि क्रमशः गति लिँदा उत्साहित भएको सुनाए । । उनले दसैंअघिको सोह्र श्राद्ध सेरोफेरोमा मुक्तिनाथ खोल्न ढिलाई हुँदा अपेक्षा गरे अनुसार पर्यटक आउन नसके पनि मुक्तिनाथ खुला भएसँगै मुस्ताङले आन्तरिक पर्यटक निकै पाएको बताए ।
बेनी—जोमसोम सडक बेमौसमको वर्षाले असहज हुँदा पर्यटकले निकै सास्ती व्यवहोर्नु परेको छ । कतिपय पर्यटक जिपमा आएका छन् भने धेरै युवायुवती मोटरसाइकलमा आएका छन् । मुस्ताङ घुम्न आएकाहरु मुक्तिनाथ दर्शनसँगै कोरला नाकासम्म पुग्ने गरेका छन् ।
सोमबार र मंगलबारको वर्षाले बेनी जोमसोम सडकमा सवारी फस्दा बारम्बार जाम हुने गरेको छ । निर्माण कम्पनीको ढिलाइ र सरोकारवालाको बेवास्ताका कारण बेनी—जोमसोम सडक लथालिङ छ ।
डाक्टर हुँ भनी करोडौं ठग्ने पोखराका राजेन्द्र भण्डारी पक्राउ
कांग्रेस गण्डकी सभापतिमा शर्मा र जोशीको उम्मेदवारी दर्ता, अरु उम्मेदवार को को छन् ?
राप्रपा अध्यक्षमा थापा र लिङ्देलको उम्मेदवारी
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, यसरी हेर्नुहाेस् !
४ जनालाई मरणासन्न पारेर महतगौंडाका टोलेगुन्डा छावा फरार
धौलागिरि क्षेत्रमा भीषण हिम पहिरो : भागदौडमा दुई शिक्षक र एक वीद्यार्थीको खुट्टा भाँचियो
मैमत्त मन्त्री मनाङे